Horudhac: Leeds United vs Arsenal… (Kooxda Arteta oo booqan doonta garoonka Elland Road) – Gool FM
(Leeds) 22 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa caawa booqan doonta naadiga Leeds United ciyaar qeyb ka ah horyaalka Premier League.
Labada kooxood oo baahi weyn u qaba guusha Premier League ayaa is wajihi doonta caawa oo Axad ah marka Leeds United ay Arsenal ku soo dhaweyso garoonka Elland Road.
Labada dhinacba waxaa laga badiyay saddex ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeeyay ee ay ciyaareen, taasoo ka dhigeysa inay labadooduba ka hooseeyaan 10-ka sare ee horyaalka Premier League kaddib siddeed kulan oo la ciyaaray horyaalka kal ciyaareedkan.
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds United, Kalvin Phillips ayaa markale la heli karaa kaddib bil uu dhaawac garabka ah la maqnaa.
Rodrigo ayaa sidoo kale ciyaari kara kaddib markii uu ka soo kabsaday Korona Fayras, laakiin Pablo Hernandez, Jamie Shackleton iyo Diego Llorente ayaan la heli karin.
Arsenal waxaa ka maqnaan doona Sead Kolasinac iyo Mohamed Elneny kaddib markii laga helay Korona Fayras intii ay ku guda jireen waajibaadka qarankooda.
Thomas Partey lama heli karo sababtoo ah waxa uu la maqan yahay dhaawac bowdada ah.
>- Arsenal ayaa guuleysatay lix ka mid ah todobadii is-arag ee labadan kooxood ay hore u kulmeen, iyadoo kulanka kalena uu ku dhammaaday barbaro.
>- The Gunners ayaa sidoo kale guul gaartay afarteedii kulan ee ugu dambeeyey ciyaaraha sare oo ay booqatay Leeds United.
>- Leeds ayaa guuldarreysan karta saddex kulan oo isku xiga horyaalka markii ugu horreysay iyadoo ka hoos ciyaareysa Macallin Marcelo Bielsa.
>- Waxaa laga dhaliyey goolashii ugu badnaa horyaalka oo ah 17 gool kaddib siddeedda kulan ee furitaanka horyaalka oo la ciyaaray.
>- Leeds United ayaa shabaqeeda gool ka ilaashatay mid ka mid ah 21-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay horyaalka Premier League ku ciyaartay garoonkeeda.
>- Waa kooxdii ugu horreysay ee 14 gool ka dhalisa horyaalka Premier League kaddib markii ay ciyaareen siddeed kulan iyagoo ah koox soo dallacday oo ku cusub horyaalka tan iyo Charlton Athletic oo sidaas oo kale sameysay 2000-01.
>- Kaliya mid kamid ah toddobadii gool ee uu dhaliyay Patrick Bamford horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ayaa yimid iyadoo kooxdiisa ku ciyaareyso garoonkeeda.
>- Arsenal ayaa guuldarro la kulantay saddex ka mid ah afarteedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka Premier League, waana in ka badan intii ay la kulmeen 12-kii kulan oo ay ciyaareen markaas ka hor.
>- The Gunners ayaa ku guuldarreysatay inay gool dhaliso mid kasta oo ka mid ah saddexdaas guuldarro.
>- Arsenal ayaa guuleysatay sagaal ka mid ah 11-kii kulan ee ugu dambeeyey Premier League oo ay ku ciyaatay Yorkshire, iyadoo labada kalena guuldarro la kulantay.
>- Pierre-Emerick Aubameyang ayaa helay kaliya afar shuut afartiisii kulan ee ugu dambeeyay horyaalka Premier League.
>- Kaliya toddobo ka mid ah 40-ka gool ee Alexandre Lacazette uu ka dhaliyey Premier League ayaa yimid iyadoo lagu ciyaarayo meel ka baxsan Magaalada London.